Ndị isi njem na-enwe nchekwube maka mgbake njem na 2022
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ndị isi njem na-enwe nchekwube maka mgbake njem na 2022
Ọ dị mma ịhụ ụdị nchekwube dị otú ahụ site na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ ka ọ na-ele anya mgbake na mmetụta nke Covid-19.
Ndị ọkachamara njem n'ime mmadụ anọ n'ime iri chere na mpịakọta ntinye akwụkwọ 2022 n'ofe ụlọ ọrụ ahụ ga-adaba ma ọ bụ gafere ọkwa 2019, na-ekpughe nyocha ewepụtara taa (Monday 1 Nọvemba) site na WTM London.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọkachamara dị elu 700 sitere gburugburu ụwa nyere aka na mkpesa Industrylọ Ọrụ WTM wee kpughee echiche dị mma maka 2022, n'ihe banyere ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ sara mbara kamakwa azụmahịa nke ha.
Mgbe a jụrụ ya, 26% nwere obi ike na ntinye akwụkwọ ụlọ ọrụ maka 2022 ga-adị ka 2019, yana 14% na-atụ anya 2022 ka ọ pụta ìhè n'afọ gara aga tupu ntiwapụ nke COVID-19 na mbido 2020.
Mgbe a jụrụ ya gbasara arụmọrụ azụmaahịa nke ha, ndị ọkachamara nwekwara nchekwube, yana 28% na-atụ anya ndobe akwụkwọ dabara na 2019, yana 16% na-atụ anya mmụba.
Otú ọ dị, ọ bụghị onye ọ bụla na-atụ anya mgbake na 2022. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ihe nlele (48%) na-eche na ụlọ ọrụ ahụ ga-adaba na 2019, na 11% na-ejighị n'aka. Maka ụfọdụ azụmaahịa n'otu n'otu, 2022 ga-abụ mgba, yana 42% kwetara na ntinye akwụkwọ agaghị ekwekọ na 2019. 14% ọzọ ejighị n'aka ka 2022 ga-esi pụta.
Simon Press, Onye isi ihe ngosi ngosi, WTM London, kwuru, sị: “Ọ dị oke mma ịhụ nchekwube dị otú ahụ site na ụlọ ọrụ njem njem zuru ụwa ọnụ ka ọ na-ele anya mgbake na mmetụta Covid-19. Ụlọ ọrụ ahụ na-agbakọta n'izu a na WTM London iji kwenye azụmahịa azụmahịa nke ga-akpụzi ọdịnihu nke njem njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ. "